Xafiiska Gargaarka bani,aadaminimada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo baaq ka soo saaray xaalada Bani,aadanimo ee Dalka Soomaaliya.
Xafiiska gargaarka bani,aadanimada qaramada midoobay ee dalka soomaaliya ayaa warbixin sanadla ah ka soo saaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya warbixinta ayaa waxaa lagaga hadlayaa xaalada bini,aadanimo ee dalka soomaaliya oo ay colaado iyo dagaalo sokeeye naafeeyeen.
Hayada OCHA ee gargaarka bani,aadanimada qaramada midoobay ayaa baaqan soo saartay 5december waxayna ku cadaysay faaladan''mashaariicda horumarinta ee hayada sanadka 2009 waa kuwo fure horumarineed ah.warbixinta ayaa lagu sheegay in 1December laga soo saaray magaalada Nairobi waxaa la sheegay in US $918 million lagu fangaraynayo 200 mashaariic ah oo ka imanaya 14 hayadood oo qaramada midoobay ah 32 NGO yo caalami ah iyo 39 NGO maxalia ah.
Waxaa sii kordhaya baahida loo qabo dhaqaalaha iyadoo sanadkii 2008da la bixiyay US$662 million halka sanadakan 2009 loogu talo galay US$918 million iyadoo tirada dadka u baahan gargaar bani'aadanimo ay dhanyihiin (3.2million) sanadakan.
Markaan fiirino xaalada manta taagan waa mid aad ugu dhaw kalabar dadka in ay haystaan waxyeelo iyo dhibaatada colaadaha sii baahaya maalinba maalinta ka dambaysa arintuna waa mid maraysa heer aad uxun mana jiraan wax badbaado ah waxaa saas yiri''isku dubaridaha gargaarka bani,aadanimo ee qaramada midoobay mr:Mark Bowden 'waxaa su,aal la,aan ah sanadka 2008da hawlgalkii bani,aadanimo ee dalka soomaaliya waxa uu ahaa mid ku qotoma sidii dadka looga saari lahaa dagaalada kulul ee u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda waxaana sii kordhayay tirada dadka tabaalaysan ee u baahan Naxariista si deegaanadooda looga fuliyo hawlgalo bani,aadanimo .
Waxaa adkayd in deegaanada laga fuliyo hawlgalo wax looga qabanayo dhanka bani,aadanimo ee dalka soomaaliya .hadaba marka laysku daro waxyaalaha ay dadku u baahanyihiin waxay ay ahaayeen Caafimaad ,quudin ,Biyo iyo nadaafad si loo badbaadiyo nolosha dadka caadiga ah si si dhaqso ah loo gaaro ujeedooyinka la higsanayo ,waxaan rabnay inan ka hortagno in guryaha laga barakoco iyadoo ay jireen kor u kac sare oo xaga cunada ah iyadoo ay yaraayeen waxsoo saarka xaga cunada.balse sanadkan fooda inagu soo haya ee 2009 waxaan rabnaa inan haqabtirno waxyaalahas oo dhan.
Hawlaha bani,aadanimada arimaha soomaaliya sanadkii 2008 waxay ahaayeen kuwo lagu bixinayay baahiyo kala duwan sida xadidka u dhaxeeya –hantida –badbaado –iyo amaanka shaqalaha (8%)beerashada iyo nolosha caadiga ah(24%)caafimaadka(40%)waxbarashada(42%).
Shaqadii ugu dambaysay ee quudinta waxaa qabatay UN food security analysis unit (FSAU) bilihii October &November waxay sheegtay in hawlaha bani,aadanimo ay ka fulisay qaybo ka mida gobolada dhexe ee dalka soomaaliya .
Iyadoo ku dhawaad ay quudin u baahnaayen 6% marka la barbardhigo bishii may oo ahayd 3% iyo sidoo kale kaalmooyinka degdega ah ee waxyaabaha la danaynayo 4%.(FSAU) ayaa iftiimisay waxyaalaha loo baahanyahay si loo ilaaliyo nolosha bani'aadanimo si dadka loo badbaadiyo.
Barnaamijka cuntada aduunka ee WFP ayaa sheegay inay 1250 mt oo cunto gargaara gaarsiiyen 41 kaan oo ah dadka soomaaliyed ee ka gudbayay xuduuda gobolka Gedo iyo gobolada jubada dhexe iyo jubada hoose ee soomaliya iyagoo ka gudbaya magaaloyinka mandera iyo liboi markii dib loo furay xududa Kenya ee soomaaliya 28kii bishii November ayaa dawlada Kenya xirtay xuduudeda markii rakaab aad ufarabadan iyo dad magangalyo doon ah usoo jeheysteen dalka Kenya oo xuduud la leh soomaaliya iyadoo markaasi cabsi ka qabtay kooxaha islaamiyinta ah ee gacanta ku haya inta badan soomaaliya.
10november ayaa iyana magaalada EL-waaq ee waqooyi bari Kenya laga afduubtay labo haween soorooyin ah oo ka shaqeynayay arimo bani'aadanimo .
Shaqalaha caalamiga ah ee ka shaqaynaya arimaha gargaarka ayaa kooxo dablay ah afduubtaan ama dilal u gaystaan taasina waa sababta ay usii yaranayso in la wanaajiyo tayada gargaarka cunto qaybinta.
Sidoo kale 30 november dooni siday raashin gargaara oo siday 11,000 mt oo galay ah ayaa tagtay dekeda magaalada berbera.
Doonida ayaa kazoo kicitintay dekeda mambasa waxaana waday markab dagaal oo NATO leedahay iyadoo laga cabsi qabay kooxaha burcad badeeda somaalida .
Doonyaha gargaarka sida ee kusoo xirta dekedaha magaaloyinka boosaaso iyo berbera waxaa ay marka hore ka yimaadan jabuuti.
Barnaamijka cuntada aduunka ee WFP ayaa sheegay in 1366 mt oo cunto ah ay gaarsiiyen dadka tabaaleysan ee kunool bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya iyo waqooyi bari soomaaliya.
Sidoo kale WFP ayaa sheegtay inay qaybisay 27630 mt oo cunto ah una qaybisay 1.6 million oo soomaali ah, bisha December ,isku soo wada duubo 260,860 ayaa u baahan naxaris bani,aadanimo barnaamijka ayaa ah barnaamijka taagerada bulshada si quudinta loo sii baahiyo 656,980 oo dad baracayaal ah ayaa iyana gargaar la gaarsiyay iyadoo guud ahaanba gargaarku sii baahayay arimaha bani,aadanimada maadama ay jiraan colaado iyo sicirbarar aad u baahsan oo dadka aafeeyay.
Iyadoo hayadu ku eegaysay warbixintan gargarka bani'aadanimo e loo baahanyahay maadama dagaal joogta ah dhacayo.
Waxay ku eedaysay in kooxaha iska soo horjeeda ciidamada itoobiya iyo kuwa dawlada KMG AH oo dhinaca iyo kooxaha islaamiyiinta ah ay badanaa gaystaa xasuuq bani,aadanimo .
C/rashiid maxamed daahir